मैले नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी नै मानेको छैन : मोहनविक्रम सिंह « हाम्रो ईकोनोमी
दुईवटाबीचको कुरा सत्य हो । विश्वस्तरमा अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा छ, रक्षात्मक अवस्थामा छ । हाम्राअगाडि थुप्रै उदाहरण छन् । यसरी हेर्दा यो पतनको दिशामा गइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । तर, त्यो वास्तविक सत्य होइन । कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास या पतनलाई मूलरूपमा भौतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । भौतिक परिस्थिति समाजमा चल्ने वर्गसंघर्ष, त्यहाँका शोषण उत्पीडनले निर्धारण गर्छ । संसारमा अहिले पनि शोषण उत्पीडन विद्यमान छ । शोषितवर्गमाथिको शोषण, दमन कायम छ । त्यो नै कम्युनिष्ट आन्दोलनको विज हो, आधारशीला हो । त्यो रहँदासम्म कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त हुँदैन ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा कयौँ उतारचढाव देखिन्छ । तर, त्यसको बीचबाट त्यो अगाडि बढ्दै आएको छ । त्यसकारण यो अहिलेको जुन रक्षात्मक अवस्था छ, त्यो अस्थायी अवस्था हो । त्यसमा पुग्न भौतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधार समाप्त भएको पाउँदैनौँ । मजबुत छ । किनभने कम्युनिष्ट आन्दोलन बाहिरबाट हेर्दा कमजोर भएता पनि त्यसको भौतिक आधार, उत्पादन शक्तिहरूको सामाजिककरणको जो प्रक्रिया हो, त्यो झन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य उज्वल छ ।
रुसले सन् १९५६ को कंग्रेसपछि लामो समयसम्म आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी नै भनेको थियो । माक्र्सवादी लेनिनवादीले चैँ कम्युनिष्ट पार्टी होइन भनेका थिए । उसले त्यो भ्रम दिइरह्यो । तर, अन्तमा त्यो भ्रम साफ भयो । ऊ आफैँले कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन ग¥यो । ठीक यसैगरी डा. केशरजंग रायमाझीले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम हुँदासम्म, कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन नगर्दासम्म सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी हो भनेकै थिए । त्यस्तो भ्रम दिएका थिए । तर, अन्तिममा त्यो समाप्त भएर गयो ।
त्यसैले कसैले आफूलाई के भन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन । वास्तवमा त्यो के हो भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले वास्तविक रूपमा नेकपाको चरित्र हेर्दा, उसको अहिलेको कार्यप्रणाली, कार्यशैली, संगठनात्मक प्रणाली हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो छैन । त्यसकारण ऊ कम्युनिष्ट पार्टी होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी दिशामा गइरहेको एउटा संगठन हो । त्यसकारण नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न सक्दैनौँ । उसको नेतृत्वको सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्न सकिँदैन ।
पहिले उसको संगठनात्मक प्रणाली हेरौँ । कम्युनिष्टको संगठनात्मक प्रणाली बुर्जुवाहरूको जस्तो हुँदैन । त्यो बेग्लै हुन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हुन्छ । छलफलमा स्वतन्त्रता, काममा एकरूपता हुन्छ । अनुशासनको एकप्रकारको प्रणाली हुन्छ । अहिले नेकपामा तपाईं यो देख्नुहुन्छ ? जनवादी केन्द्रीयता कहाँ छ, त्यहाँ ? निर्णयहरू कसले गर्छन् ? नेकपाको अहिलेको सांगठनिक प्रणाली हेर्नुभयो भने त्यो कम्युनिष्टको जस्तो छैन । सम्पूर्ण रूपमा बुर्जुवाहरूको जस्तो छ ।
कार्यक्रमलाई हेर्नुस्, कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट सरकारको कार्यक्रम किसान, मजदुर, शोषित जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको हुन्छ । नेकपाको सरकारका कार्यक्रममा तपाईंले त्यस्तो देख्नुभएको छ ? सरकारको केन्द्रमा किसान, मजदुर, शोषित जनता छन् ? छैनन् । हो, कम्युनिष्ट पार्टीले पनि कतिपय अवस्थामा तत्कालीन परिस्थितिलाई हेरेर केही पुँजीवादी कार्यक्रम अपनाउँछन् । तर, मूलदिशा समाजवाद उन्मुख नै हुन्छ । नयाँ जनवाद उन्मुख हुन्छ । तर, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको कुरा गर्ने नेकपाका कार्यक्रम त्यसप्रकारको छैन ।
किसानका हकअधिकारको कुरा, भूमिसुधारको कुरा, हदबन्दीको कुरा, देशमा राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षणको कुरा कहाँ छ ? सरकारको कुरा छाड्नुस्, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत आएको छैन । तर, उनीहरूकै नेताले भन्ने गरेका छन्, राजनीतिक प्रतिवेदनबाट सामन्तवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ । भारतीय विस्तारवाद भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ । जबकि, भारत विस्तारवाद मात्र होइन, साम्राज्यवादकै रूपमा पुगिसकेको छ । तर, उनीहरू सबैतिर सम्झौतापरस्त नीति अपनाइरहेका छन् । यसैगरी, अहिले देश कुन अवस्थामा छ भन्नेमै उनीहरू गलत ब्याख्या गरिरहेका छन् ।
अझै पनि देश अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेसिक अवस्थामै छ । तर, उनीहरू नयाँ जनवादको अवस्था पार गरेर समाजवादको अवस्था आइसक्यो भन्छन् । समाजवादको अवस्था आउन त देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेसिक अवस्था समाप्त हुनुपर्छ । आज पनि सामन्ती व्यवस्थाका अवशेष छन् । औपनिवेसिक शोषणका अवशेषहरू पनि छन् । यी सबैलाई समाप्त नगरी कसरी समाजवादमा जान सक्छौ ? समाजवादमा जानका लागि पुँजीवादको विकास हुनुपर्छ । तर, यहाँ अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेसिक अवस्था कायमै छ । यी सबैलाई अनदेखा गरेर उसले हामी समाजवादीदिशामा गयौँ भनिरहेको छ । त्यसकारण उसका तत्कालीक कार्यक्रम पनि सही छैन ।
ठीक यसै गरेर वर्ग संघर्षका सिद्धान्तमा पनि उसमा स्खलन देखिन्छ । सशस्त्र संघर्षको अनिवार्यताको सिद्धान्त उसले छाडिसकेको छ । यो भनेको संशोधनवादी सिद्धान्त हो । सशस्त्र संघर्ष बिना आजको अवस्थामा परिवर्तन सम्भव छैन । तर, सशस्त्र संघर्षको अनुकुल परिस्थिति छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । सशस्त्र संघर्ष पूर्वमालेले गरेको थियो, माओवादीले गरेको थियो । तर, त्यो उग्रवामपन्थी भड्काव थियो । हामीले उनीहरूलाई त्यसै भनेका थिएनौँ । त्यो पुष्टि भएको छ । किनभने उग्रवादी भड्काव अन्ततः दक्षिणपन्थी दिशामा गएर टुंगिन्छ । अहिले उनीहरू त्यहीँ पुगेका छन् । यस्तै, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्त पनि उनीहरूले छाडिसकेका छन् ।
हामीले कम्युनिष्टका सिद्धान्तलाई रणनीति र कार्यनीतिका रूपमा बाँड्छौँ । जुन सिद्धान्तको मैले ब्याख्या गरेँ, यान्त्रिक रूपमा सबै परिस्थितिमा ती लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले त, माले वा माओवादीको सशस्त्र संघर्षलाई हामीले विरोध ग¥यौँ, उग्रवादी भड्कावको भण्डाफोर ग¥यौँ । सशस्त्र संघर्ष अहिले पनि लागू गर्नुपर्छ, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अहिले पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन । कार्यनीतिले के भन्छ भने, कुनै खास बेलाको परिस्थितिअनुसार नै हामीले संघर्ष तय गर्नुपर्छ । त्यसैले त आन्दोलनहरूमा हामीले पनि समर्थन ग¥यौँ, सहभागी भयौँ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि एकखाले वामपन्थी संकीर्णतावादी विचार पाइन्छन् । जसले यो गणतन्त्र पुँजीवादी हो खारेज गर्नुपर्छ भन्छ । यो संविधान पुँजीवादी हो, त्यो खारेज गर्नुपर्छ भन्छ । ती अवस्तुवादी सोच हुन्, तिनलाई हामी गलत मान्छौँ । कुनै पनि कुरालाई यान्त्रिक रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने हामी ठान्छौँ । तर, त्यसको अर्थ मूलभूत सिद्धान्त छाड्नुको चैँ हामी विरोध गर्छौं । मूलदिशाबाट, मूलपथबाट उनीहरू विचलित भए त्यसैले हाम्रो आलोचना हो ।
उस बेलाको राजनीतिक परिस्थितिका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थियौँ । त्यसबेला एमालेले राष्ट्रियताको विषयमा राम्रो अडान लिएको थियो । नाकाबन्दीका विरुद्ध राम्रो संघर्ष गरेको थियो । भारतीय दबाबविरुद्ध राम्रो संघर्ष गरेको थियो । चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि राम्रो भूमिका खेलेको थियो । त्यसबेला मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको संविधानविरुद्ध अभियान चलाइरहेका थिए ।
त्यसपरिस्थितिमा हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा सरकारलाई बलियो बनाउनु उपयुक्त ठानेर सरकारमा गएका थियौँ । त्यसोतः हामीले कयौँ आन्दोलन सँगसँगै गरेका थियौँ । पाँच नम्बर प्रदेशलाई फोरेर मधेसमा बेग्लै प्रदेश बनाउन हुँदैन भन्नेमा पनि हामी साथसाथै थियौँ । तर, अहिलेको सरकारले जुन नीति अपनाइरहेको छ, त्यो सही छैन । त्यसैले त्यतिबेलाजस्तो नजिकको सम्बन्ध अहिले छैन । यद्यपि, हामी उनीहरूलाई दुश्मन शक्तिका रूपमा लिएका छैनौँ । प्रतिक्रियावादी शक्ति मानेका छैनौँ । मित्रशक्ति नै मानेका छौँ । हामी आलोचना गर्छौं तर, त्यो मैतृपूर्ण आलोचना हो । उसलाई हामी वामपन्थी शक्तिकै रूपमा लिएका छौँ ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमै यो भइरहेको हुन्छ । रुसमा कम्युनिष्ट पार्टी विघटन भयो । बुर्जुवाहरू फेरि सत्तामा आए । भारतमै पनि जसले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्थे, तिनीहरू बडारिँदै गए, मोदी फेरि सत्तामा आए । यसो हुनुको निर्णायक शक्ति जनता नै हुन् । जनता भनेको जनताको चेतना हो । जनताको चेतना कति उठ्छ, त्यति क्रान्तिकारीहरू बलियो हुन्छन्, जनताको चेतनामा भ्रम पार्न सकियो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू हावी हुन्छन् ।
भारतमा मोदीले हिन्दू धर्मको भ्रम दिए, ट्रम्पले राष्ट्रवादको भ्रम दिए र आफ्नो शक्ति मजबुद पारे । यस्तो भइराख्छ । संसारमा कयौँपटक क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर हुन्छन्, समाप्त पनि हुन्छन् । तर, यी अस्थायी कुरा हुन् । मूलकुरा, भौतिक परिस्थिति हो । त्यहाँ चल्ने वर्ग संघर्ष हो । त्यहाँ चल्ने शोषणहरू हुन् । त्यसले नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पैदा गरेको हो । त्यसले नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विजयको मार्गमा अग्रसर बनाउँछ ।
माक्र्सवादलाई कहिल्यै पनि अपरिवर्तनशील छ भन्दैनौँ । माक्र्सको समयमा जुन माक्र्सवाद थियो, लेनिनको समयमा बेग्लै रूपमा आयो । माओको समायमा बेग्लै रूपमा आयो । समाजवादका बीचबाट फेरि नयाँ जनवाद निस्कियो । नेपालमा हामीले नयाँ जनवादको कुरा गरे पनि यो बुर्जुवा गणतन्त्रलाई पनि समर्थन गरेका छौँ । धर्मनिरपेक्षतालाई समर्थन गरेका छौँ । कम्युनिष्टको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रवाद हो, तै पनि हामीले राष्ट्रवादको पक्षमा संघर्ष गर्छौं । कम्युनिष्टहरूले माक्र्सवादलाई जडसूत्रवादको रूपमा या धर्मशास्त्रका रूपमा लिँदैन, परिस्थितिअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ ।
तर, जनताको प्रश्न भन्नुहुन्छ भने, जनता निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको चेतनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । उदाहरणका लागि, जबसम्म जनता भ्रममा थिए, राणाशासन टिक्यो, पञ्चायती व्यवस्था बलियो भयो । जतिबेला जनतामा चेतना आयो, त्यो विस्फोटले राणाशासन फाल्यो, पञ्चायत ढाल्यो, राजतन्त्र फाल्यो । यो महत्वपूर्ण कुरा छ । जतिबेला जनताको चेतना उच्च हुन्छ, त्यसले क्रान्ति गर्छ, त्यसले नयाँ परिवर्तन ल्याउँछ, जतिबेला जनताको चेतना कुण्ठित हुन्छ, जातिवादलाई पनि प्रश्रय दिन्छ, सतिप्रथालाई पनि प्रश्रय दिन्छ । त्यसकारण जनताको चेतना स्थिर कुरा होइन ।
यसको अर्को कोण पनि छ । समाज जहिले पनि न्युनस्तरबाट माथिल्लोस्तरमा गइरहेको हुन्छ । दासयुगबाट सामान्तवाद, सामन्तवादबाट पुँजीवातिर क्रमशः गइरहेको हुन्छ । अर्को कुरा, प्रत्येक समयका शासकवर्गले आफ्नो समयको शासन व्यवस्थालाई सर्वश्रेष्ठ विकल्परहित भन्छ । जस्तो, महेन्द्रले भनेका थिए, पञ्चायत व्यवस्था विकल्परहित व्यवस्था हो । त्यस्तै, पुँजीवादीले पनि त्यस्तै ब्याख्या गर्छ भने त्यो अनौठो होइन । तर, त्यसभित्र पनि देखा परिररहेको संकटका कारण यो झनझन कमजोर हुँदै जाँदैछ । फासीवादतिर जाँदैछ ।
जसरी संसारमा कयौँ चिज परिवर्तन हुन्छन्, मानव चरित्र, मानव दृष्टिकोण, मानव स्वभावमा पनि त्यस्तो प्रभाव पर्छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त यस्ता धेरै भइराख्छन् । डा. केशरजंग रायमाझी पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सामेल भएका थिए । उत्साहपूर्वक लागेका थिए । तर, पछि उनी पतन भए । अरु पनि थुप्रै उदाहरण छन् । यसको कारण भनेको आफूलाई निरन्तर क्रान्तिकारी बनाइराख्न नसक्नु हो । जनताको बीचमा नरहने, कम्युनिष्ट सिद्धान्त र निष्ठालाई कडाइपूर्वक व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्नेहरूमा त्यस्तो विचलन आउँछ । कयौँ दबाबहरू आउँछन् ।
आन्तरिक, बाह्य, सांगठनिक दबाब आइरहन्छ, त्यसलाई चिरेर निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ । एउटा क्रान्तिकारी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर क्रान्तिका लागि, पार्टीका लागि, देशका लागि, सिद्धान्तका लागि काम गरिरहन्छ भने उसमा कहिल्यै पतन आउँदैन । तर, देश, जनता, शोषित वर्ग, समाज, क्रान्तिबारे सोच्न छाडेर आफ्नो जीवनबारे, भविष्यबारे, करिअरबारे चिन्ता हुन थाल्छ । त्यसपछि उसमा पतन सुरु हुन्छ । राजनीतिमा मात्र होइन, विभिन्न पेशामा रहेकाहरूमा पनि यो समस्या देखापर्छ । तर, यस्ता कुराले कम्युनिष्ट आन्दोलन रोकिँदैन । पात्र फेरिए पनि आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकाहरूमा जब लगातार संघर्ष, आत्मआलोचना, अन्तरसंघर्ष र शुद्धीकरणको प्रश्न कमजोर बन्दै जान्छ, त्यसबेला कम्युनिष्ट पार्टी बिग्रिँदै जान्छ । कयौँपटक गलत तत्वको प्रभाव बढ्छ, सहीहरू पनि कमजोर बन्दै जान्छन् । तर, क्रान्तिकारीहरूले लगातार संघर्ष गर्न छाड्नु हुँदैन । तपाईंले हेर्नु भयो भने, रुस र चीनका ठूला क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिका पार्टीहरूमा के भइरहेको छ ? पुटिनलाई हेर्नुस्, कुनै समय उनी कम्युनिष्ट थिए ।
आज के गरिरहेका छन् ? रुसका कम्युनिष्टहरू धनाढ्य वर्गमा परिणत भए । चीनमा त्यही हुँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्र होइन, बुर्जुवाहरूको पार्टीमा पनि कयौँ यस्ता पात्र हुन्छन्, जसले देशका लागि, समाजका लागि ठूलो योगदान गरेका हुन्छन् । तर, कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेकाहरू नै व्यक्तिगत जीवनमा लागेको देख्नुको कारण समग्रमा राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय चरित्रको विकास हुन नसक्नुको हो । यहाँ कयौँ नेताले व्यक्तिगत फाइदाका लागि नदीनाला बेच्छन् ।
विदेशीसँग सौदावाजी गर्छन् । करोडौंँ अर्बौंको घोटाला गर्छन् । ब्युरोक्रेसीमा रहेकाहरू त्यसै गर्छन् । उनीहरू सामान्य अशिक्षित किसान, मजदुर होइन् । माथिल्लो तहमा रहेका पढेलेखेकाहरू नै छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रको विकास अत्यन्त न्युनस्तरको छ भन्ने देखाउँछ । बर्जुवा देशहरूमा जति राष्ट्रिय चरित्रको विकास भएको छ, त्यति पनि यहाँ विकास भएको छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसको असर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा पनि परेको छ । नभए माथिल्लो कर्णाली किन बेच्नुप¥यो ? नेपालले आफैँ बनाउन सक्छ नि माथिल्लो कर्णाली । तर, केही करोड, अर्बको लाभका लागि विदेशी कम्पनीलाई दिइन्छ । नेपाल आफैँले गर्न सक्ने अरु कयौँ परियोजना पनि त्यसैगरी विदेशीलाई दिइएको छ ।
यसले पनि हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रमा गम्भीर प्रकारको कमजोरी छ भनेर देखाउँछ । हामी कहाँ राजनीतिक पक्षमा ठूलठूलो परिवर्तन भए, तर राष्ट्रिय चरित्र, सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि आन्दोलन हुन सकेन । बरु, बुर्जुवा भनिएका देशहरूमा समेत सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि ठूलठूला आन्दोलन भए र त्यहाँ राष्ट्रिय चरित्रको निर्माण भयो । त्यसकारण सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि हामी कहाँ पनि ठूलो आन्दोलनको जरुरत छ ।
उसले कम्युनिष्ट सरह अहिले काम गर्न सक्छ र गरुन् भन्ने हामीले सोचेका छैनौँ । किनभने उनीहरू कम्युनिष्ट होइनन्, त्यसका लागि धेरै क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो नभए पनि कमसेकम बर्जुवासरह नै भए पनि विकासका काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा लागू गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
तर, मलाई अहिले सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्यो भने पनि गर्न दिँदेनन् । किनभने, यहाँको समाजको बनावट त्यस्तो छ, कमशिनखोर, माफियाहरूको ठूलो प्रभाव छ । प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टहरूको ठूलो प्रभाव छ । उनीहरू बलियो जरा हालेर बसेका छन् । सरकार चक्रब्युहमा फसेको छ । तै पनि सरकारले त्यसलाई चिरेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । दिष्टि न्युजबाट